Munaasabadda lagu Daah Furayo Maamulka Hawada Ayaa Laguwdaa in Maalinta berri ka Dhacdo Magaalada Muqdisho(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Dowladda Soomaaliya ayaa diyaar garowgii u dambeeyay ugu jirta la soo wareegida Maamulka Hawada Soomaaliya, iyadoo maalinta berri la furi doono Xarunta lagala socon doono maamulka Hawada Soomaaliya.
Qalabkan lagula socon doono maamulka hawada ayaa lagu rakibay xarunta Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada, iyadoo dad loo tababarayo inay ku shaqeeyaan qalabkan.
Munaasabadda lagu daah furayo maamulka hawada ayaa maalinta berri ka dhici doonta magaalada Muqdisho, iyadoo munaasabadda ay ka qeyb geli doonaan Madaxda dowladda.
Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka Maxamed C/llaahi Salaad ayaa dhowaan sheegay in dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah ula soo wareegi doonto Maamulka Hawada Soomaaliya inta aanu dhamaan sanadkan.
Dhowr jeer oo hore ayay dowladdu sheegtay inay la soo wareegeyso maamulka Hawada Soomaaliya oo tan iyo sanadkii 1991 laga maamulayay Magaalada Nairobi, ayna gacanta ku heysay Hey’adda ICAO.